Jaajuus shaqadiisa ku waayay jacayl - iftineducation.com
iftineducation.com – Sirdoon Jermal ah oo waayay shaqadii uu ka hayay Latvia ka dib markii uu xiriir jacayl oo qarsoodi ah la bilaabay gabadh deegaankaas ka soo jeeda ayaa ku guul daraystay dalab uu ku doonayay in magdhaw lagu siiyo.
Ninkaas oon magaciisa la sheegin ayaa ahaa madaxa sirdoonka ee caasimadda Latvia ee Riga, laga bilaabo sanadkii 2006 ilaa 2008-dii.
Hay’adda sirdoonka ee Jermalka ayaa ninkaas dib ugu soo celisay dalka ka dib markii uu madaxdiisa u sheegay in uu xiriir jacayl samaystay.
Wuxuu isku dayay in uu magdhaw u helo afar boqol oo kun oo Yuuroo oo soo galilahayd oo uu waayay, laakiin maxkamad ku taala Munich ayaa tuurtay kiiskiisa.
Hay’adda sirdoonka ee dalkaasi Ruushka oo magaceeda loo soo gaabiyo (BND) ayaa mamnuuc ka dhigtay in shaqaalaha ay dalka dibadiisa ka shaqaynaya ay calaaqaad dhaw la samaystaan dadka jooga deegaannada ay ka shaqaynayaan.
CAFISKA LOO FIDINAYO DIIQA XABASHIGA WAA MAXAY
Labo khasaaro oo haweenka garoobka ahi caan ku yihiin Iyo Sadax faa’iido oo Laga Helo Guurkooda.